Rova Magnetic isina waya charger netambo Supplier uye Kambani |Group
Magnetic wireless charger ine tambo
15W inokurumidza kuchaja
D467 Magnetic Wireless Charger yakanyatsogadzirirwa kurongeka kwemagineti ye iPhone 12 akateedzana, 12pcs yakavakirwa-mukati magineti block, iyo yakasimba magineti adsorption basa inokutendera iwe kugadzirisa kona zvakasununguka pasina kutsauka kubva pakati pechaja.
Superior yakavakirwa-mukati magineti inochengeta charger yedu munzvimbo uye inodzivirira kutsvedza.Isa nharembozha yako pakati pechaja kuti uwane yakanakisa kuchaja mhedzisiro.
Iine Qi mhando yakajairwa, iyo Magnetic Charger inotsigira mana ekubuda emagetsi zvirongwa: 5W/7.5W/10W/15W, Iyo inongozvigadzirisa kune akasiyana emagetsi ekubuda zvichienderana neiyo foni modhi kuti ive nechokwadi chekuchaja nekukurumidza uye kwakachengeteka kwechishandiso chako.
Maximum 15W magineti dhizaini inobvumira, kuitira kuti foni yako inyatso kuenderana neyekuchaja coil uye kuiswa pane yekuchaja padhi kuti iwane nekukurumidza uye yakagadzikana kuchaja.Iine hungwaru hwekudzivirira tekinoroji, inopa mabasa akadai sekudzora tembiricha, over-voltage uye over-ikozvino chengetedzo, pfupi dunhu kudzivirira, uye kuona kwekunze kwemuviri.
Iyi magineti charger inoenderana ne iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max uye inoenderana neMagSafe nhare kesi uye AirPods modhi ine isina waya yekuchaja kesi.Iyo magineti yekumisikidza chiitiko inongoshanda ku iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max.Pasina iyo magineti sticker kesi, mafoni asina Mag-Safe haazotsigire magineti chimiro.
Kudzivirirwa uye Kuchengeteka
Magnetic Wireless Charger ine hungwaru yekudzivirira tekinoroji yekupa tembiricha kutonga, overvoltage uye overcurrent kudzivirira, pfupi dunhu kudzivirira, uye kuona chinhu chekunze.Chengeta foni yako igare yakatonhorera uye yakachengeteka paunenge uchichaja
Rated Output 5W/7.5W/10W/15W
Inotsigirwa Devices 5W/7.5W ye iPhone, 10W/EPP15W yeSamsung
Dziviriro SCP, OTP, OCP, OVP
Zvakapfuura: Bvisa Magnetic Liquid Silicone Case ye iPhone 12 series
Zvinotevera: Magnetic 2 mu1 Wireless Kuchaja Stand ye iPhone uye Airpods
Magnetic 2 mu 1 Wireless Kuchaja Stand ye iPh...
Bvisa Magnetic Liquid Silicone Nyaya ye iPhone ...
Magnetic Liquid Silicone Nyaya ye iPhone 12 akatevedzana